Geofumadas: 48 khadadka madow iyo caddaan - Geofumadas
Disember, 2009 egeomates My, Leisure / waxyi
Xiritaanka sanadkan, taasoo ahayd dhadhammo badan oo la yaab leh, waxaan kaliya kuu rajeyn karaa sanad wanaagsan 2011 oo aan wax badan ka qaban doonno. Kuwa u akhriya balooggan wax ka badan 299 gelitaan, boostadani way dhammaatay, kuwa aan akhrin, ku dhowaad 50 khadadka ayaa qeexaya farshaxanka geosmiga iyo raaxada.
AutoCAD: Waa barnaamij aad ku ganacsan karto.
Microstation: Noocyo badan oo software ah haddii aad tahay lafaha lafaha.
Manifold GIS: Barnaamijka loogu talagalay geofumar
gvSIG: Waa inaad cadaymeysaa
Google Earth: Maalin maalmaha ka mid ah ayaan isticmaali doonnaa iyada oo aan ogaanayno
ESRI: Laydhka dhalada
dgn: Laba qaab oo dhadhan
dwg:Waa maxay dhamaantood?
Internet iyo Blog (8):
Word Press: ugu fiican abuuray internetka
+ 512 K: Mid u baahan tahay qallafsan
Blogger: hadaanay ahayn Google Waxaan ku tuuri lahaa qashinka qashinka
AdSense: Cents laakiin waxaad baraneysaa
AdWords: Si aad u hesho cents index Google
Saddex saaxiibo: Gerardo, Tomás, Manuel
Saddex saaxiibadood: Nancy, Angie, Elisa
Shabakadaha bulshada: Habka luminayo waqtiga maxaa shaqaynaya
Mowduucyada shakhsiga (8):
Maalin maalmaha ka mid ah sanadka: 17 bisha Juun
Shirkadda: Los chicks
Wakhti u diyaargarooba: Kufsi fiican iyo aniga waa
Wakhtiga dilka ah ee dilaaga ah: Live Qoraa
ereyga: raajooyin iyo kuwa kale x
Toy A caan ah: The wii
Ku saabsan qalabka farsamada casriga (8):
GPS: Mid kasta
Wadarta guud: Sokkia
Waxyaabaha la qabanayo: Guji, gujiguji
A toy toy: Acer Aspire Hal (waa)
Qalab lagu ciyaaro: Aigo
Alaabta lagu ciyaaro si aad u xoqdo: Wacom Banboo Fun
Hal wish: Liiska aad u dheer
Qalab lagu ciyaaro: modem Alcatel
Mawduucyada kaladuwan (8):
2010: Wax badan shaqo
Hugo Chavez: xndejo with awooda
Mel Zelaya: Dhalashadii iska caabin
Siyaasadda: Waxaad u baahan tahay mid cusub hogaaminta
Latin America: Dad badan burcad-badeednimada
Obama: Mise waa dhaqso ama soo celinta abaalmarinta
2011: badanaa rajo
Ku saabsan safarka iyo meelaha (8):
Lagu Waxyooday: Tag - si aad u aragto - xaggee - of
Hal cabitaan: Pozol barafka iyo qorfe
Cunto: salad baradhada
Cunto degdeg ah: Quiznos sub
Goob fasax ah: Cerro Zatoca
Meesha aan rajeynayo inaan tago: Girona
Koorso muhiim ah: Kufan badda
Madadaalo: viaha jarin shaqada
Post Previous" Hore Geophysics: Saadaalinta 2010: Barnaamijka GIS
Post Next Soo-booqdayaashaada khariidadda GoogleNext »